Global Voices teny Malagasy » Manambara ny fanohanana avy amin’ny Omidyar Network ny Global Voices · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 05 Jolay 2010 21:50 GMT 1	 · Mpanoratra Ethan Zuckerman Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Amerika Avaratra, Etazonia, Holandy, Media sy Fanoratan-gazety
Amin-kafaliana no ilazako fa nanao fampiasam-bola mahatratra 1,2 tapitrisa dôlara amin'ny asan'ny Global Voices ny Omidyar Network . Fifandaminana mpanao asam-panasoavana ny mpiara-belona, natsangan'ny mpanorina ny eBay antsoina hoe Pierre Omidyar sy ny vady andefimandriny Pam, ho entiny manatsara ny fiainan'ny olona amin'ny alalan'ny “fitrandrahana ny herin'ny tsenambarotra”ny Omidyar . Efa nanohana ny sasany amin'ireo Fifandaminana izay ankafizin'ny ankamaroantsika koa ny Omidyar – toy ny Wikimedia Foundation , Creative Commons , Ushahidi , WITNESS  – ka henikaja tokoa izahay raha tafiditra ho mitovy “kilasy” amin'ny Fifandaminana (Fikambanana no mahazatra azy amin'ny fiteny andavanandro) mpifikitra amin'ny mangarahara miorina ao Angletera MySociety  sy ny vondrona Kenyana mpanao hatsikana politika, The XYZ Show .
Tena mientanentana tokoa izahay amin'izao fivoarana vaovao izao sy hiasa miaraka akaiky amin'ny namanay ao amin'ny Omidyar, indrindra moa fa Atoa Stephen King,  Tale tompon'andraikitra voalohany amin'ny fampiasam-bolan'ny Omidyar. Ho avy amin'ity taona ity ny fanampianay isa roa ny filankevim-pitantanana , ampidirana an'i Stephen sy solontena iray fahatelo voafidy avy amin'ny mpiasa maharitra sy ny mpanolotena. Mankasitraka ny Omidyar – sy ny mpanohana rehetra izay mahafinaritra  – manao mandrakariva izay hampijoro ity vondrom-piarahamonina ity.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/07/05/6967/
 nanao fampiasam-bola mahatratra 1,2 tapitrisa dôlara amin'ny asan'ny Global Voices ny Omidyar Network: http://www.omidyar.com/portfolio/global-voices
 “fitrandrahana ny herin'ny tsenambarotra”ny Omidyar: http://www.omidyar.com/about_us/evolution
 ny filankevim-pitantanana: https://globalvoicesonline.org/about/board-of-directors/
 ny mpanohana rehetra izay mahafinaritra: https://globalvoicesonline.org/special-thanks/